China niile- na-otu ụzọ marking igwe factory na suppliers | ACE igwe
All-na-na-otu ụzọ marking igwe
TW-FJ All-in-one Thermoplastic Kneader Marking Machine bụ igwe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na igwe na-ekpo ọkụ na igwe na-ekpo ọkụ, nke metụtara obere ma gbasasịa ma gbasasịa ọrụ dị ka nkewa, ụlọ akwụkwọ, agbata obi bi. na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Igwe ahụ dị obere na ibu, dị mfe ma dịkwa mfe ịrụ ọrụ na naanị ndị ọrụ abụọ maka ịrụ ọrụ.
Igwe ahụ na-emetụta ngwa ngwa obere ma gbasasịa ma gbasasịa dị ka ebe a na-adọba ụgbọala, ụlọ akwụkwọ, ebe obibi na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Igwe ahụ dị obere na ibu, dị mfe ma dịkwa mfe ịrụ ọrụ na naanị ndị ọrụ abụọ maka ịrụ ọrụ.
TW-FJ All-na-otu Thermoplastic Kneader Marking Machine
Elu akụkụ (L * W * H) 1200X900X1100mm
Total arọ nke igwe 220KG
Mkpuchi ihe tank tank ikike 120KG
Ike nke igbe bead igbe 25KG
Uwe mkpuchi 1.2-4mm
Ikwute dispending usoro Gear chụpụrụ, Akpaghị aka ipigide
Okpomọkụ nke ihe mkpuchi mkpuchi kpụ ọkụ n'ọnụ 170-220 ℃
LPG cylinder norm 15KG
Obosara akara 100、150、200、300mm ， nwekwuru ihe metụtara usoro zebra nke 400、450mm
Efficiencyrụ ọrụ kwa ụbọchị Ogbe 150
Nwere ike kwadebe na boosting ọkwọ ụgbọala, boosting efere, boosting oche？ Boosting efere / Boosting oche
1.Hand-chụpụrụ yinye mere ka ndị na-akụ ihe gbazee, na-adị ọkụ ma na-arụ ọrụ.
2.Ekekere ọkụ ọkụ dị iche iche dị njikere maka iji ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nke nwere arụmọrụ dị elu ma na-agbaze ngwa ngwa.
3. Ngwunye ọkụ na-agbanyụ ọkụ pụrụ iche nke ọkụ ọkụ nwere ike ịhapụ onye ọrụ ka ọ hụ ọnọdụ nke ọkụ ọkụ ma gbanwee njikwa nke ụzọ ọkụ na ire ọkụ. Ya mere mee ka akara ọrụ ahụ dị nchebe ma rụọ ọrụ nke ọma.
4.Two ibughari mmịpụta stacks ihapu iyuzucha gas na oge iji nọgide na-enwe ezi na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi.
5.Triple-layered mbughari mkpuchi na-eme ka ọ dị mfe ihicha ketulu ma gbanwee ihe agbaze agba na agba dị iche iche.
Soro nzaghachi ndị ahịa mgbe ị natara ngwaahịa ndị ahụ, gbalịa ike anyị niile idozi ma melite ogo na ọrụ ahụ
ihe karịrị 90% nke ngwaahịa na-ebupụ
Na-elekwasị anya na Nanị Onye Ọrụ ma were ndị ahịa anyị tolite ọnụ
1.Can enwere m ike ịkpụzi akara ọkpụrụkpụ? Oleekwa otú?
A: Ee, enwere ike idozi ya site n’iji mma na obe. Ogologo akara nkịtị bụ 1.2-4 mm.
2. you nwere ike ịmepụta igwe ahaziri?
A: Ee, anyị nwere ike. Anyị bụ ndị na emeputa nke thermoplastic ụzọ marking igwe na Guangzhou City.
3. Kedụ maka ọrụ ire ahịa?
A: A: Anyị nwere ọrụ inye ndụmọdụ gbasara ọrụ na ndụ igwe niile. Anyị na-enyere aka idozi nsogbu site na WhatsApp, Skype, na email site na izipu foto na vidiyo.
4.Olee otu akara akara di iche na obosara?
A: A: Ọ bụ n’ihe ị họọrọ. Ọtụtụ mgbe, anyị na-akwado ụgbọ mmiri nke na-enye ọnụahịa ezi uche dị na ya. Ọzọkwa, maka akụkụ ndị ọzọ, ọ nwere ike ịbụ na FEDX, DHL na nkwupụta mba ha ..
Nke gara aga: Oyi spraying ụzọ marking igwe
Osote: Manual Road akara Machine
Honda Gx35 Concrete jijiji ishingrụcha Screed ...
1680KG na 0.045CBM Hydraulic Mini Excavator